Tweety Pro, yemahara kwenguva yakatarwa, inotibvumidza kuti tione nguva yedu kubva kuNotification Center | IPhone nhau
Tweety Pro, yemahara kwenguva yakatarwa, inotibvumidza kuti tione nguva yedu kubva kuNotification Center
Kunyangwe kune vazhinji vashandisi Twitter inovandudzwa pasocial network uye ivo vanongoshandisa chete Facebook, kune vamwe vanhu vazhinji, Twitter ndiyo yega social network yavanoshandisa, nekuda kwemikana iyo inotipa isu, nezve chii uye ndiani wekutevera pasina kutambura kubva kune yakadai sevhisi sevhisi, ona izvo shamwari yedu yaifarira, kana kwaaive nekudya kwemanheru husiku hwapfuura. Parizvino muApp Store tinogona kuwana matatu mafomu, nekugadzwa anonyanya kushandiswa anotibvumidza kubvunza yedu Twitter account: Tweetbot, Twitterrific uye yepamutemo kunyorera. Hapana chimwe cheizvi zvinoshandiswa chinotibvumidza kuverenga maTweets azvino kubva kuaccount yedu yeTwitter kubva kuNotification Center. Kana isu tichida kuzviita, isu tinofanirwa kutendeukira kune jailbreak kana kushandisa Tweety Pro.
Tweety Pro ine yakajairwa App Store mutengo we2,99 asi kwenguva yakati rebei tinogona kuikanda zvachose mahara. Tweety Pro inotibvumidza kumisikidza anosvika maviri maakaundi akasiyana kuratidza nguva imwe neimwe patinoratidza nzvimbo yekuzivisa, kungave kubva kune chero application kana zvakananga kubva kukiyi skrini ye iPhone yedu.
Nekudzvanya pane chero yazvino ma tweets pane yedu nguva, tinogona kuimaka seyatinoda, kuidzokorora kana kuvhura iyi link kwayakatitungamira. Pakati pesarudzo dzekumisikidza, tinogona kusimbisa kana tichida chete ekutanga mazwi eiyo tweet kuti aratidzwe kana iyo yese tweet. Zvinotitenderawo simbisa kubva kune maakaundi atinoda kuti maTweets achangoburwa aratidzwe, yakanaka kana isu tichiziva yakakosha account uye isu tinoda kukurumidza kuziva kuti yavo yekupedzisira tweet yaive chii.
Dzimwe sarudzo dzinopihwa ndedzekuratidza yakajairwa kana yakawanda nyanzvi theme ine rumwe ruzivo rwakawanda. Kana isu tikashandisa Twitter kana Tweetbot sey Twitter application, Tinogona kuvasarudza kuti vavhure pavanodzvanya pane chero ma tweets.
Tweety Pro Widgets ye Twitter3,49 €
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Tweety Pro, yemahara kwenguva yakatarwa, inotibvumidza kuti tione nguva yedu kubva kuNotification Center
Apple inoti iOS 10.2.1 inogadzirisa iPhone 6 uye 6s isingatarisirwi nyaya yekudzima
Apple inodzokororazve kuedza kwayo muhungwaru hwekunyepedzera